Daawo Weerar loo adeegsaday Walxo sun ah oo ka dhacay magaalada London - Saafi Films Production Somali Films Hindi Af Soomaali Musalsal heeso
Daawo Weerar loo adeegsaday Walxo sun ah oo ka dhacay magaalada London
Weerar loo maleenayo in loo adeegsaday walxo sun ah ayaa ka dhacay Suuqa laga dukaameesto ee tratford oo ku yaala bariga magaalada London ee Caasimada dalka Ingriiska.
Sida ay ku warantay BBC Lix qof ayaa dhaawac ka soo gaaray weerarkan sunta loo adeegsaday ee ka dhacay bariga London, waxaana dadka dhaawaca soo gaaray la sheegay in xaaladooda aysan halis aheyn.
Ciidamo katirsan booliiska magaalada London ayaa gaaray halka uu ka dhacay weerarkan Sunta loo adeegsaday, waxaana goobtaasi la sheegay in ay ku murmeen labo koox oo dhalinaro ah , waxaana xiligaas kadib lasoo tuuray walxo loo maleenayo in ay Sun yihiin.
Booliiska ayaa xiray wiil dhalinyaro ah oo looga shakisan yahay in uu ka dambeeyay weerarkan sunta loo adeegsaday, waxa ayna booliiska sheegeen in arintan baaritaano ku wadaan.
Udugii Jaceylka 62
Daawo Diyaarad 40-sano kahor loo soo afduubtay Muqdisho oo dib loogu celiyay Jarmalka.
WARKA 08 03 2019 Wasiirkii dastuurka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo Geeriyooday iyo Rw Kheyre…
Kenyans Fled Lamu After Al Shabaab Attacks To Return Home
World News 16 09 2015 ONLF oo xilka ka xayuubisay saraakiil sare.
Gabar Soomaaliyeed oo garsoore ka ah cayaaraha heerka hoose ee kubada cagta dalka Ingriiska